ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखियो ! – Halkhabar kura
१५ पुष २०७७, बुधबार २२:१२
ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखियो !
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। समय अभावले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको मुद्दाको फेरि अदालतले पेसी तोक्नेछ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर माइतिघर-मण्डलामा लडिबुडी खेल्दैछन्
काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रचण्ड-नेपाल माइतिघर मण्डलामा गएर प्रधानमन्त्रीका लागि लडिबुडी खेलिरहेको बताएका छन्।
“देशलाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ दर्शनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफलमा व्यस्त हुनुपर्ने नेताहरू महाधिवेसनसम्म पनि पर्खिन नसकेर छट्पटिएर सडकमा पुग्नु भएको छ,” सुदूरपश्चिम प्रदेशका ओलीपक्षीय कार्यकर्ताको बबरमहलमा जारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले भने, “त्यो वैचारिक विचलन हो।”
“वरिष्ठ नेतालाई तेस्रो होइन, दोस्रो नै हुनुपर्‍यो। अनि कार्यकारीलाई अहिल्यै प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो,” उनले भने, “अहिले केटाकेटीपन देखाएर माइतिघर मण्डलामा प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर लडिबुडी खेल्दै हुनुन्छ।”
Next केटीहरुको यी अंगमा पुग्छ पुरुषको पहिलो छड्के नजर